Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate
Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate
Ganzabee Dibaabaa (mt 5000), Yoomiif Qajeelchaa (mt 5000) fi Siifan Hasan (mt 1500) Diamond Race injifachuudhaan badhaasa $40,000 argataniiru
Wolmorkii atleetiksii Diamond League 2015 magaalaa Braasilsitti geggeeffameen Yoomiif Qajeelchaa meetira 5000’n injifannoo guddaa argate. Yoomiif morkattota isaa irratti ol’aantummaa kan argate fiigicha daqiiqaa 12:53.98 xumuruudhaan. Hagoos Gabrahiwooti lammaffaa ta’uu danda’eera.
Yoomiif Qajeelchaa woldorgommii atleetiksii bara kanaa heddu irratti hirmaatee injifannoo gurguddaa galmeessiseera. Yoomiif atleetii gara funduraatti abdiin guddaan irratti gatameedha.
Wolmorkiin Diamond League bara 2015 wolmorkii marsaa 14 booda kaleessa xumurame. Wolmorkii irratti hirmaatan heddu injifachuudhaan Ganzabee Dibaabaa (mt 5000), Yoomiif Qajeelchaa (mt 5000) fi Siifan Hasan (mt 1500) Diamond Race injifataniiru. Diamond Race injifachuu tokkoo tokkoo injifataaf badhaasa hanga $40,000’tti argamsiisa. Kana malees, atletonni gosa fiigicha irratti hirmaatanii ol’aantummaan xumuran gosa fiigicha saniin muudama sadarkaa addunyaatti tokkoffaa jedhamu nama gonfachiisa.
Previous articleBBC’n Afaan Oromootiinis akka tamsaasu waamichi dhihaate
Next articleSagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf